Ngamunye wethu enakekela ukudalwa izimo zokuphila ukhululekile anakekele umkhaya wakhe, ngakho emizini eminingi yanamuhla efakwe underfloor. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izingane zethu kungaba ugijime bengafaké zicathulo emakhazeni ebusika ngoba efulethini nombala evuthayo, ngokuphelele ngaphandle kokwesaba umkhuhlane. izinhlelo ezinjalo ziye baziswa abanikazi izindlu ezincane obujwayelekile, ngoba ngenxa ukungabikho radiators besiyoba sikhulu zivimbele amavidyo square eziyigugu. Nokho, sonke sibhekana kusukela kulesi simo, lapho kungase kudingeke ukulungisa underfloor.
Idivayisi kanye yezimbangela ezivame kakhulu iloli
phansi evuthayo kubhekwa enye yezindlela elula kakhulu amalahle yokuhlala. Kuyinto uhlelo wesifunda elakhiwa ngo isakhiwo phansi. Ngaphansi screed noma ama-tile wiring ahlelwe ukuqinisekisa Ukushisa umfaniswano. Lihlinzeke Ukushisa element sihamba ugesi ngokusebenzisa thermostat evumela ukusetha lokushisa oyifunayo esihlinzeka / ukuvala uhlelo. Uma Ukushisa ngokweqile kwenzeka Ukukhipha ngokuzenzekelayo Ukushisa isici. Kodwa njenganoma yiluphi olunye uhlelo, kungaba kungazelelwe behluleka, bese kudingeke ukuba balungise underfloor. Ngaphambi kokuba uqale ukuze uxazulule inkinga, kudingeka sithole ukuthi yini inkinga. Ukuze isigaba izinkinga ezivamile zihlanganisa ukulimala Ukushisa isici, thermostat noma lokushisa inzwa.
Okufanele ukwenze uma kungekho voltage ngesikhathi okokufaka Ukushisa ikhebula?
Ngaphambi kokuqala ukukhanda underfloor, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba khona kwamandla sikokufaka kagesi kohlelo. Uma kungenjalo, kufanele sithole ukuthi okuzenzakalelayo umthwalo livaleke-off. Endabeni kusebenze yokuguquguqula inkinobho, nje phansi, kodwa uma lokho kungasebenzi, kufanele ufune imbangela yezinkinga supply nezintambo zikagesi.
Okufanele ukwenze uma athutha ezilimele Ukushisa ikhebula?
Ezimweni eziningi, ukuhluleka enjalo kwenzeka ngisho uma ufaka uhlelo, futhi kwaphela isikhathi esithile kungase kungaqashelwa. Ngezinye izikhathi imbangela umonakalo ukuba abe inobudlabha izinyathelo abanikazi ngokwabo ngubani umkhankaso kulungiswe. Uma ku inqubo yokusebenzisa i sokuprakthiza kagesi noma wabona blade is ngephutha punctured kagesi Ukushisa ikhebula kubalulekile ngokuzimela afeze asike izidumbu zabantu ingxenye flooring futhi ukuthola indawo iphutha. Ashile noma izintambo ensimbi alenga kumele agezwe kahle bese uxhuma ngokufanisa ububanzi we imikhono, abese crimped emihlathini ukuphokophela. Esikhathini emalungeni Nciphisa emikhonweni unamathele, ukufuthelana ngokusebenzisa isakhiwo umshini wokomisa izinwele. Ngo inqubo ukupholisa ayilutho uvalwe uphawu amalunga omzimba. Lokhu kulandelwa ukulungisa ubuhlobo izibuya efudumele.
Okufanele ukwenze uma zokugwema ukuphuka of inzwa lokushisa noma ukulawula lokushisa?
Eqaphela ukuthi lab 'ngemva phansi evuthayo ukufuthelana kuze uphawu elinqunyiwe, sisaqhubeka sishiswa, ungaqiniseka ukuthi uhlulekile lokushisa inzwa. Kulokhu, ukukhanda bafudumale electric phansi kufana esikhundleni isici engaphelele. Yenza kube lula ngokwanele. Ukuze wenze kanjalo, ukususa ingxenye ephukile tube lukathayela, ungakhohlwa ingasaphathwa ngqo lapho itholakala khona, futhi esikhundleni salo esisha. Uma ukufaka endala imishini kwenziwa nge kokunikezwa kwe-technology, ngaphandle kokusebenzisa ngokubethwa kwemitshingo nezinye izinsimbi, bese endaweni yayo ungabeka inzwa lokushisa, isiqeshana on thermostat.
Uma isizathu kwehluleka thermostat okuyiphutha, ukukhanda of Ukushisa underfloor kuyehla kube esikhundleni salo.
Kazan ezibiyele, Tatarstan: incazelo, umlando, izakhiwo